Mon, May 25, 2020 at 1:09pm
काठमाडौँ, २७ साउन साङ्लोले नसताएको घर कमै भेटिएला । अँध्यारा कुनाकाप्चामा लुकेका साङ्लाहरू फुत्तफुत्त निस्केर तपाईंलाई हैरानै गर्छन् होला । गर्मी र बर्खाका बेलामा साङ्लाको संख्या ह्वात्तै बढ्छ । अनि त कहिलेकाहीँ पकाइराखेको तरकारी वा मुछिराखेको पीठोसहित साङ्ला फाल्नुपर्ने आवश्यकता आइलाग्छ । बजारमा पाइने स्प्रेले साङ्लालाई मार्छ तर त्यसमा भएको रसायनले स्वास्थ्यलाई हानि पनि पु–याउँछ । यहाँ हामी केही घरेलु उपाय बताउँछौं जसको..
काठमाडौँ, २७ साउन नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । सायद पितृसतात्मक सोंच-चिन्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ । युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन् । उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग गर्न चाहन्छन् । गरिरहेका हुन्छन् पनि । किनभने अक्सर युवतीहरु पुरुषबाट सुरक्षा खोज्छन्..
घरधन्दाबाट छुटकारा कसरी ?
एजेन्सी, २७ साउन । तपाई घरधन्दामा कत्तिको ब्यस्त हुनुहुन्छ ? कहिलेकाहीँ आफ्नो घरको अनेकौं काम सम्झेर दिक्क त लाग्दैन ? यदि त्यसै हो भने धन्दा नमान्नुहोस् ! तपाईंलाई सब घर धन्दाबाट मुक्त हुनको लागि पनि विकल्प निस्कियो बजारमा ! जान्नलाई निकै रोचक लाग्ने हुनसक्छ तर, वास्तविक हो की बजारमा अब कपडा धोईदिने र पट्याइदिने रोबोट पनि आउँदैछ । हाल सम्म राम्रो ज्ञात भएको..
काठमाडौँ, २६ साउन घर भाडामा बसेको कर लिने कानूनलाई कडाइका साथ लागू गरेपछि अहिले शहरमा घर भाडामा बस्नुअघि भाडामा बस्ने तथा घर धनीबीच विभिन्न प्रकारका सम्झौता गर्नु पर्ने अघोषित नियम समेत लागू भएको देख्न सकिन्छ । घर भाडामा बस्नुअघि दुबै पक्षले एक प्रकारको सम्झौता गर्नु पर्छ, त्यसलाई चलनचल्तिको भाषामा रेन्ट एग्रिमेन्ट पनि भनिन्छ । रेन्ट एग्रिमेन्ट भन्नाले कुनै पनि कोठा, फ्ल्याट, घर अथवा..
राति सुत्नुअघि यस्ता कार्य गर्दा स्वास्थ्यमा यति ठूलाे फाइदा, आजैबाट सुरू गराैँ
काठमाडौँ, २५ साउन सुत्नु अघि नुहाउने बानी राख्नु भएको छ ? सम्भवत नहोला । भएपछि त राम्रो । तर यो कुरा भन्दा पहिले तपाई एउटा कुरा थाहा पाईराख्नुहोस् । तातोपानीले नुहाउँदा रक्तसञ्चार सुरुमा केही बढी हुन्छ, तर पछि मन्द हुन्छ । तर चिसो पानीले नुहाउँदा रक्तसञ्चार सुरुमा मन्द र पछि केही बढी हुन्छ । त्यसैले चिसो पानीले नुहाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा..
किनमेल पनि एउटा कला हो, यसरी घटाउनुहोस् आफ्नो घरायसी खर्च
काठमाडौँ २४ साउन महिना दिनमा तपाईं के-के कुरा खरिद गर्नुहुन्छ कहिले ख्याल गर्नुभएको छ ? दाल, चामल, नुन, तेल, मरमसला, साबुन, सागसब्जी । यी दैनिक आवश्यक्ताका सामाग्री भए । यससँगै हामीलाई बेलाबखत नयाँ लुगा फेर्न मन लाग्छ, लुगा खरिद गर्छौं । बेलाबखत पुस्तक पढ्न मन लाग्छ, पुस्तक खरिद गर्छौं । बेलाबखत घरबाहिरको खानेकुराको तलतल लाग्छ, खानेकुरा खरिद गर्छौं । कहिले बेडकभर, सिरक आदि..
डिभी चिट्ठा पर्नेमा नेपाल पाँचौं स्थानमा, यो वर्ष कति जाँदैछन् अमेरिका ?
काठमाडौं, २४ साउन। २०२० को अमेरिकाको डिभी चिट्ठा पर्नेमा नेपाल पाँचौं भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) को भिसा बुलेटिन अगस्ट अंक अनुसार नेपालका ३ हजार ६ सय ९६ लाई डिभी परेको छ। उनीहरू पहिलो पत्र पाउने छन्। छान्ने प्रक्रियाका सबै मापदण्ड पूरा हुने मात्र अमेरिका आउन पाउने हुन्। नेपालभन्दा धेरै इजिप्ट ५,५६८, रसिया ५,११८, प्रजातान्त्रिक कंगो ४,७४३, र इरान ४,१०१..
गाडीको झ्यालबाट फोहोर फ्याँक्ने बानी छ ? सुध्रिनुस्, बन्दैछ जरिवाना गराउने नयाँ कानुन
काठमाडौँ, २३ साउन सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा झ्याल तथा ढोकाबाट सडकमा फोहोर फ्याँकदा एक देखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक संसदमा दुबै सदनबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बुधबार प्रतिनिधिसभा..
काठमाडौँ, २३ साउन निरोगी जीवन बाँच्न हामी सबै चाहन्छौं । सधै तन्दुरुस्त र जवान रहन चाहन्छौं । कुनैपनि रोग, कष्ट आदिबाट टाढा रहन चाहन्छौं । अस्पताल धाउनुपर्ने, औषधी खानुपर्ने, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने यावत् प्रक्रियाबाट मुक्त रहन चाहन्छौं । हामी चाहन्छौं, जीवनभर अस्पताल जान नपरोस् । औषधी सेवन गर्न नपरोस् । प्राकृतिक रुपमै निरोगी र तन्दुरुस्त जीवन विताउन पाइयोस् । कसरी पाउने यस..
यस्ता पुरुषलाई ध्यान दिने गर्छन् महिलाहरू ?
एजेन्सी, २२ साउन । के तपाइहरूलाई थाहा छ ? कस्ता पुरुषहरूलाई महिलाले ध्यान दिन्छन् र मन पराउँछन् । थाहा पाउनुहोस् यस्ता पुरुषलाई ध्यान दिन्छन् महिलाले : खुट्टाको सफाइ यदि पुरुषहरू महिलाको नजिक हुन् चाहन्छन् भने उनीहरूले आफ्नो खुट्टाको सरसफाइ गर्न जरुरी छ । किनकि महिलाहरूले पुरुषको खुट्टामा ध्यान दिने गर्दछन् । स्टामिना कुनै पुरुषको स्टामिना राम्रो छ वा अलिक बलवान र कुनै पनि काम फुर्तीसँग गर्न..
आज भारी वर्षासहित चट्याङकाे सम्भावना, सतर्क रहन मौसमविद्काे आग्रह
काठमाडाैं, २२ साउन । आज देशका विभिन्न स्थानमा चट्याङ तथा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाे मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ । बुधबार चट्याङ र भारी वर्षाको सम्भावना हुँदा सतर्कता अपनाउनमहाशाखाले आग्रह गरेको छ। भारी वर्षाका कारण मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा पहिरो जाने तथा भूक्षयसमेत हुने जोखिम रहेकाले यातायात अवरुद्ध हुने सम्भावना देखिएकाले सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। 'देशको केही स्थानहरुमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने चट्याङ..
कार्यस्थलमा तनाव : व्यवस्थापन गर्ने केही उपाय
काठमाडौँ, २१ साउन कहिले काहीँ हामी धेरै तनाव लिने गर्छौं, जसका कारण कुनै पनि काम राम्रोसंग हुन पाउँदैन । तनावका कारण त्यो काम कसरी गर्ने भन्ने सोच्न सकिरहेको हुँदैन । तपाई क्षमतावान हुँदा-हुँदै पनि तनावका कारण आफ्नो कार्य-कुशलता देखाउन सक्नु हुन्न । यसले गर्दा तपाईंलाई असफलता प्राप्त हुन्छ, जसले तपाईंको तनाव झन बढ्न सक्छ । त्यसैले अफिसको कुनै पनि मिटिङ अथवा प्रजेन्टेसन..
काठमाडौँ, २१ साउन । सरकारले गरिब परिवार पहिचानका लागि दोस्रो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम पुनः सुरु गरेको छ । यसअघि २०६९ सालमा २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचानको काम भएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले शुक्रबार स्याङ्जा जिल्लाबाट दोस्रो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्घाटन गर्नुभयो । दोस्रो चरणमा १२ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ । ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी,..
गर्धन दुख्दा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौँ, २० साउन अचेल गर्धन दुख्ने समस्याले धेरैलाई पिरोल्ने गरेको छ । गर्दनको दुखाइले गर्दा काम गर्न मात्रै होइन कहिलेकाहीँ त खानपिन गर्नसमेत गाह्रो हुने गर्दछ । तर, बेलैमा ध्यान दिन सके यस्तो दुखाइबाट जोगिन सकिन्छ । कुुनै पनि सामान बोक्ने र उचाल्ने गर्दा गर्दनमा क्षति नहुने गरेर उचाल्ने गर्नुपर्छ । टाउकोमा सामान राखेर बोक्नु राम्रो हुँदैन । लामो समयसम्म लगातार कम्प्युटरमा काम..
असफल प्रेमले सडकमा पुगेका यी पूर्व नासु !
काठमाडौँ, १९ साउन दुई दशकअघि सरकारी जागिरे हुनु चानचुने कुरा होइन । त्यो बेलाको सरकारी जागिरको सान बेग्लै हुन्थ्यो । बिहेबारीदेखि घरको बन्दोबस्ती तथा जीवनशैली नै फरक हुन्थ्यो । काठमाडौँ टङ्गालका ५८ वर्षीय मनोहर केसी त्यो बेला सडक विभागको नायब सुब्बा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको एक युवतीसँग गहिरो प्रेम थियो । त्यही प्रेम बिछोडिँदा जीवन यात्रा नकारात्मक भएर बदलियो । “धादिङमा सडक विभागको..
खाना खाएपछि भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम
शनिबार, श्रावन १८, २०७६ साल
काठमाडौँ, १८ साउन प्राय मनिसहरुले खाना खानसाथ फलफुल खानुपर्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ पाइन्छ । तर खाना खानसाथ फलफुल खान स्वास्थ्यको हिसावले राम्रो हुँदैन यस्तो गर्दा पेट ढूस्स हुने लगायत ग्यास्ट्रिक को समस्या देखिन सक्छ । त्यसैगरी खाना पश्चात लगत्तै जस्तो चिया वा कफि पिउनु पनि राम्रो होइन । कतिपय चिया वा कफीको शौकिन हुन्छन् त्यसैले खाना पछि पनि पिउने गर्छन् जो शरीरको..
कामकाजी भर्सेस गृहिणी : के चाहन्छन् पुरुष ?
काठमाडौँ, १८ साउन पुरुषलाइ आफ्नी श्रीमतीले भात पकाइदिए, छोराछोरी स्यहारसुसार गरिदिए, आमाबुवाको ख्याल राखे, लुगाफाटो धोइदिए, घर सफा गरिदिए, पाहुनापात टारिदिए पुग्छ । कतिपय पुरुषले भने आफ्नी श्रीमती भात र भान्सामा खुम्चिएर नबसुन् । घरबाहिरको काम गरुन् । पेशा-व्यवसाय गरिदिए हुन्थ्यो । आयआर्जनको मेलोमेसो मिलाए हुन्थ्यो । आफुले जस्तै पैसा कमाइदिए हुन्थ्यो । घरको आर्थिक दायित्व उनले पनि बोकिदिए हुन्थ्यो । वास्तवमा के..
काठमाडौँ, १८ साउन मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू–भाग भन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ । आजबाट विस्तारै उत्तरतिर (नेपाल तर्फ) सर्दै जाने क्रम शुरु भएकाले नेपालसम्म आइपुग्न अझै केही दिन लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । उक्त मनसुनी न्यून चापीय (वर्षा गराउने वायु) नेपालतर्फ सर्ने क्रम शुरु भएकाले सोमबारसम्ममा मनसुन पूर्ण सक्रिय हुने मौसमविद् समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।..
निन्द्रा नलागेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय !
काठमाडौँ, १७ साउन । के तपाईँलाई राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन ? यदि त्यसो हो भने अपनाउने गर्नुहोस् । यी उपायहरू जसले गर्दा छिटै सुत्ने बानी बसाल्नुका साथै छिटै निन्द्रा लागी निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट पनि मुक्ति दिलाउन सक्दछ । छिटै निन्द्रा लाग्नका लागि अपनाउनुहोस् यी उपाय : ज्यादा भोजन वा खाली पेट नबस्ने बानी बसाल्नुपर्दछ । किनकि धरै खान र खाली पेटले गर्दा पनि..
वास्तुशास्त्रअनुसार कुन दिशातर्फ फर्केर पढ्दा राम्रो ?
काठमाडौँ, १६ साउन कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा वास्तुशास्त्रका सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु जरूरी हुन्छ । आजकलका भवनहरू सबै सुखसुविधाले भरिपूर्ण हुन्छन् तर वास्तु नमिलाई बनाइएकाले तिनमा बस्ने मान्छेलाई जतिखेर पनि तनाव भइरहेको हुन्छ । त्यसैगरी विद्यालय भवन वा घरको अध्ययनकक्षको वास्तु मिलेको छैन भने पढाईमा खासै प्रगति हुन पाउँदैन । विद्यार्थीहरूले अध्ययनका प्रति रुचि देखाउँदैनन् । वास्तुशास्त्रका अनुसार पूर्व, उत्तर र ईशान दिशालाई..
मध्यरातमा निद्राबाट ब्युँझदा गर्दै नगर्नुस् यी ५ काम !
काठमाडौँ, १५ साउन प्रायजसो मानिसहरु मध्यरातमा बिउँझने गर्छन् । ब्युँझिएपछि फेरि निदाउँन कोसिस गर्दा पनि उनीहरु निदाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरुले गर्न नहुने काम गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ हामीले मसत निन्द्रबाट बूँझदा गर्न नहुने कामको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं । १. कसैकसैलाई आधा रातमा निन्द्राले छोडे या भोक लागे खानेकु्रा खाने बानी हुन्छ । यसरी रातको समयमा खानेकुरा खानाले मोटोपना..
यसरी घरेलु उपायले नै सजिलै चम्काउन सकिन्छ दाँत
काठमाडौँ, १५ साउन मानिसहरूको विभिन्न कारणले गर्दा दाँत पहेँलो हुन्छ। जस्तै बढी चिया, कफी, तमाखु र चुरोटको प्रयोग पनि हुन सक्छ । जसले गर्दा मानिसहरू खुलेर बोल्न , हाँस्न रुचाउँदैनन् । यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन मानिसहरू विभिन्न थरिका टुथपेस्ट प्रयोग गर्न थाल्छन् ।सबै टुथपेस्ट राम्रो हुन्छन् भन्ने हुँदैन ,कतिपय टुथपेस्ट दाँतलाई सेतो बनाउनको सट्टा उल्टै पहेँलो बनाई दिन्छ। तर, यस्तो समस्याको लागि..
निःशुल्क जापानी मेकअप, सेवाग्राही अचम्म !
चिप्लेढुङ्गा, १५ साउन । पोखरा महानगरपालिका सेवाग्राहीको चाप हुने महानगर हो । मङ्गलबार सेवा लिन महानगर पुगेका सेवाग्राही भने केही अचम्ममा परे । महानगरको मूल ढोकामा एक जापानी महिला मेकअपका सामानसहित चिटिक्क परेर बसेकी थिइन् । उनका वरिपरि अन्य सौन्दर्यकलाका विद्यार्थीहरु पनि थिए । बोर्डमा लेखिएको थियो ‘जापानको निःशुल्क मेकअप ।’ सबै व्यस्त थिए, महानगर आएका सेवाग्राही महिलाको हातमा मेहन्दी र..
कस्ती युवतीलाई श्रीमती बनाउन चाहन्छन् पुरुष ?
काठमाडौँ, १५ साउन एक युवा, एक युवती आपसमा दम्पती बन्छन् । उनीहरुको घर बन्छ । परिवार बन्छ । एउटा बेग्लै संसार बन्छ । प्रेम नगरी विवाह गर्ने प्रचलन अझ पुरानो हो । अहिलेपनि यथावत छ । नितान्त अपरिचित युवा र युवतीबीच विवाहको मेलोमेसो मिलाइन्छ । आफन्त, इष्टमित्र वा शुभेच्छुकको सहयोगमा उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् । कहाँको युवा, कहाँको युवती अब दम्पती बन्छन्..
काठमाडौँ, १३ साउन यस्ता छन् कारण १. छाति पोल्दैन। अधिकांश मानिसको खाना खाएपछि सिधै बेडमा जाने बानी हुन्छ। यसो गर्नाले स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ र छाति पोल्ने समस्या आउन सक्छ। चाँडै खाना खानुहुन्छ भने यो समस्या आउँदैंन । २. तौल नियन्त्रणमा रहन्छ। यदि तपाईं तौल नियन्त्रणमा राख्न चाहनुहुन्छ भने बेलुकीको खाना चाँडै खानुहोस्। खाना खाएपछि केहीक्षण हिड्नुहोस्। जतिसुकै बढी खाना खानुहोस्, यस्तो तरिका..
आजैदेखि शुरु गर्नुस् योगा, यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौँ, १२ साउन योगाले मानिसलाई शान्त स्वभावको बनाउने मात्रै होइन रोग लाग्ने सम्भावना पनि कम गर्छ । त्यसैले ध्यान तथा योगा गर्ने बानी छैन भने आजैबाट सुरु गर्नुस् । किनकि, ध्यान तथा योगा गर्ने बानीले तपाईंको स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । सबैलाई योग गर्ने बिधि र तरिका थाहा नहुँदा अर्को समस्या पनि आउन सक्छ । योग गर्ने सही..
आँखा फरफराउँछ ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण !
काठमाडौँ, १२ साउन हाम्रो समाजमा आँखा फरफरायो भने कुनै घटना वा खबर प्राप्तिको संकेत हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । आँखाको फरफराई पनि महिला र पुरुषमा अलग–अलग तरिकाले विश्वास गरिन्छ। कुनै समाजमा पुरुषमा दाहिने आँखा फरफरायो भने शुभ समाचारको सूचक मानिन्छ भने देब्रे आँखा फरफरायो भने अशुभ समाचारको सूचक मान्ने गरिन्छ । महिलामा भने देब्रे आँखा फरफरायो भने अशुभ समाचारको सूचकका रुपमा लिने गरिन्छ।..
खलङ्गा, १२ साउन । जुम्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क हवाईसेवा दिइने भएको छ । जुम्लामा गर्भवती र सुत्केरीलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा व्यवस्था भएअनुरूप जुम्लामा गत वर्षदेखि नै पूर्णरूपमा निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय..
मस्त निद्रा लाग्छ ? मख्ख नपर्नुस्, राेग पनि हुन सक्छ !
काठमाडौँ, ११ साउन धेरैजसो मानिसहरु निद्रामा समस्या भएकाले चिन्तित छन् । तर, केही मानिसहरु पनि छन् जसलाई निद्रा समयमा आउँछ र, कतिपयलाई त काममा मन पनि लाग्दैन, सुतौँ सुतौँजस्तो भइरहेको हुन्छ । यो पनि स्वास्थ्य समस्या नै हो । यसलाई हाइपरसोम्निया भनिन्छ । हाइपरसोम्निया एउटा निद्राको डिसअर्डर नै हो । जसलाई राती अत्यन्त निद्रा आउँछ र विहान उठ्न गाह्रो हुन्छ, उनीहरुलाई..
अदुवा चिया पिउनुका यति धेरै फाइदा
काठमाडाैं, ११ साउन । चिया धेरैका लागि साथिभाइ र परिवारसँग समय विताउने बाहाना हुन्छ भने कसैका लागि लत हुन्छ । पछिल्लाे समय युवा-युवतीहरू माझँ पनि चिया निकै लाेकप्रय छ । धेरैले चिया स्वादकै लागि पिउँछन् । हामीले पिउने चिया पनि आ–आफ्नै छन् । कोही चियामा दूध मिसाएर त कोही नमिसाई । हरेक तरिकाले फरक–फरक स्वाद चियामा पाउन सकिन्छ । चियाका पारखीहरूले अनेक स्वादका..
Results 740: You are at page 8 of 25